Sonos Move, mutauri mutsva weSonos anoenda kunze kwenyika | Gadget nhau
Sonos anoenderera mberi achishanda kuti ape kurwa kwakanaka kwezvimwe nzira maererano nehungwaru uye nemhando yepamusoro kurira, takave nemufaro wekuongorora akawanda emidziyo yavo uye panguva ino vakatadza kupotsa kuvhurwa kwavo kwazvino, Sonos Mov. Isu tinotaura nezve Sonos nyowani mutauri wekunze aine bhatiri rakazvimiririra uye ikozvino zvakare neBluetooth, gara kuti uwedzere kuongorora Senguva dzose, tiri kuzokuudza nezve akakosha mapoinzi echinhu ichi chakasarudzika chakapa kukosha kwakakosha muSonos mutemo kusvika ikozvino, uye ndezvekuti havana zvishandiso zveBluetooth mukatalog yavo, ndoda nebhatiri.
Sezvo pane dzimwe nguva, Isu tinoperekedza ongororo iyi nevhidhiyo mauchakwanisa kuona iyo isingabhokisi, zvirimo mubhokisi uyezve kuti iyi Sonos Movha inogadziridzwa uye inoitwa sei, mukana wakanaka wekutarisa usati watevera iyi yakadzama ongororo uye nehunyanzvi dhata yakananga pane ino webhusaiti.
1 Sonos Fambisa hunyanzvi hunhu
2 Dhizaini: Zvinoenderana nezvange zvichimboitwa nechiratidzo
3 Yakavakwa kuti igare: IP56 uye bhatiri rinobviswa
4 Sonos yekare, ikozvino neBluetooth
Sonos Fambisa hunyanzvi hunhu
Tisati tatanga kuongorora dhizaini, ngatitarisei kune technical data, isu tinowana mutauri ane maviri kirasi D edhijitari ekuwedzera, tweeter, yepakati-woofer uye mamaikorofoni mana yatinogona kudyidzana nayo. Inobatanidza Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 b / g / n, uye AVRCP, SBC uye AAC rutsigiro. Ehezve, padanho rehunyanzvi, iyi Sonos Move haifanire kushaya chero chinhu uye zvinoita sekunge ichadaro.
Hatina data rehunyanzvi padanho remagetsi muma decibel, sezvazvinowanzoitika kuchiratidzo, zvisinei izvo zvandinogona kukuvimbisa ndezvekuti zvinonzwika zvine simba, uye zvakawanda. Icho chinhu chakada kufanana neicho isu tanga tichinakidzwa semuenzaniso muSonos One kusvika zvino, Saka musimboti hatisi kuwana zvikonzero zvinogutsa kupokana nesimba rayo, bvunzo dzekutanga dzatakaita dzakagutsa. Kubhadharisa bhatiri rayo (2.500 mAh) isu tinoshandisa kubatana USB-C uye 100-240V yekuchaja base.
Dhizaini: Zvinoenderana nezvange zvichimboitwa nechiratidzo
Isu tinowana chigadzirwa icho zviyero 240 x 160 x 126 millimeter, ine dhizaini inozivikanwa uye inokurumidza kutimutsa kune iyo Sonos Mumwe. Kune izvi zvine huremu hwese hwe3 Kg kusanganisira bhatiri, Icho hachisi chaicho chakareruka chigadzirwa pamusika tichifunga kuti chikonzero chayo chekuve chinotakurika, asi isu tinofanirwa kutaura kuti huremu chiratidzo chevatauri vehunhu.
Pamusoro tine iyo Yakasarudzika Sonos Mamiriro Ekutaridza LED, pamwe nekutsvedza kwekubata kutonga maneja multimedia zvemukati. Aya ndiwo maratidziro atichaita kudyidzana nawo zviri nyore, asi chandinofanira kuratidza zvakanyanya nezve dhizaini yacho inyaya yekuti Sonos akasarudza kuti iite kuti izivikanwe, kana iwe ukabata zita rechiratidzo iwe uchakurumidza kuziva zvigadzirwa zvacho. Kumushure, kuwedzera kune USB-C kubatana kwatinako gonhi diki rekuitakura, iyo on / off bhatani uye isina waya bhatani.
Yakavakwa kuti igare: IP56 uye bhatiri rinobviswa
Segudzanzwi rakanaka rekunze, rinofanirwa kunge riine hunhu chaihwo kuti rione kuramba kwaro, uye imhaka yekuti mamiriro ezvinhu mazhinji anogona kuitika kunze kunoisa kutendeka kwechigadzirwa panjodzi. Semutemo wenguva dzose, Sonos inogadzira zvishandiso, senge Sonos One, iine mamwe maitiro ekurwisa. Iyi Sonos Move haigone kuve shoma, IP56 certification iyo inodzivirira guruva uyezve zvakare inoputika, kunyangwe isu tisingazokwanise kuvimbisa kuti inoramba yakasimba kana tikanyudza zvachose.
Chimwe chinhu chakakosha mukugarira inyaya yekuti Sonos afunga kubheja pane kusanganisira inobviswa 2.500 mAh bhatiri, Izvi zvinorevei? Zvakanaka, chaizvo kuti kusimba kwayo hakuzovi pasi pehutano hwebhatiri, izvo zvinowanzove chinhu chekutanga chinowanzo kutadza. Mune ino kesi Sonos anotivimbisa kuti tinogona kutenga bhatiri zvakasiyana, kunyangwe tichida kuve nebheteri rekuchengetera kuwedzera kuzvitonga kwayo, kana kana zvatiri kunyatsoda kuri kutsiva nekuti yarasikirwa nehunhu uye kuzvitonga, inoita senge yakabudirira, pamusoro pekuchinja iri nyore kwazvo uye nekuchaja futi, yayo yekuchaja "base", inova iri diki ringi ine USB-C yekubatanidza iri nyore kwazvo uye nekuiisa pamusoro isu tichava nekuzvimirira kwakakodzera, Inogona zvakare kushandiswa neiyo yakabatana, hongu.
Sonos yekare, ikozvino neBluetooth
Tine, zvingave sei zvisina kudaro ne AirPlay 2, kubatana pamwe neanopfuura zana masevhisi emimhanzi masevhisi nekutenda kune Sonos application uye isu zvakare tine mamaikorofoni mana, izvo zvakagadzirirwa kutipa isu zvakakwana kuenderana neayo maviri makuru chaiwo vabatsiri pamusika, Alexa uye Google Mubatsiri, kunyangwe nekuda kweizvi tichazoda kubatana kweWiFi. Hapana chiratidzo, ehe, chekugona kupindura mafoni. Tichireva kuzvitonga, yakakosha mumhando iyi yechigadzirwa, Sonos anoda kuti isu tivimbise kusvika maawa gumi ekutamba, mumamiriro akajairwa neBluetooth isu takasvika nyore nyore 9 o'clock, izvi zvinoderera kana tikashandisa WiFi, zviri pachena.
Iyi yekubatana kweWiFi haiwanzo kuwanikwa kunze, saka tichava neBluetooth 4.2 yekubatanidza nenzira yakapusa, kutumira mimhanzi uye kuidzora. Izvi zvinoita kuti ive yakanyanyisa kuita basa uye inomiririra pamberi uye shure paSonos. Isu takaona kuti kubatana kweBluetooth kuri nyore sezvaungatarisira kubva kuna Sonos, uye pamidziyo yeIOS tinogona kutarisa kuzvitonga kwemukurukuri.
NeSonos Mov tinowana mutauri anoshanduka-shanduka weSonos, vanga vasina kumbobvira vagadzira chishandiso chakadai uye ivo vaisatomboda zvachose kuti chisashayike mairi. Uyu une mutengo, 399 euros ndizvo chaizvo zvinoverengwa neSonos Mov, uye iwo mutengo unodhura. Sezvo pane dzakawanda nguva ndakati mutengo wakapihwa neSonos Beas kana Sonos One unoratidzika kunge wakachipa, ndinofanira kutaura kuti Sonos Move inoita kunge inodhura kwandiri, ndiri pachena kuti inopa mukana wekuve mumwe Sonos pamba iyo yekuwedzera kuti ndikwanise kuiburitsa mumba, asi zviri kundiomera kufungidzira ndichiibhadhara 399 euros yacho. Icho chokwadi chekuti iwe uri wenguva dzose yechiratidzo kana kuti iwe wawakajairwa kuita premium ruzha inozotamba kana uchiita sarudzo yekugona kusarudza imwe kana imwe sarudzo. Mushure meyedzo, iyo Sonos Movha inopa ine simba uye yemhando ruzha, dhizaini uye zvinhu zvinoenderana neiyo mhando uye isina muganho kubatanidza, icho chakatenderera chigadzirwa chingave chisingawanikwe kune wese munhu.
Dhizaini uye mhando yezvinhu
Kuzvimiririra kukuru uye kwakanaka kuramba kunze
Kubatana kwakazara, kunyangwe vabatsiri chaivo
Unhu uye ruzha rune simba
Mutengo unoita kunge wakakwirira kwandiri
Iyo "mutoro mhete" ingangove yakanyanya minimalist
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Reviews » Sonos Move, mutauri mutsva weSonos anoenda kunze kwenyika
Chizvarwa chitsva cheiyo IKEA Nzvimbo app yave kuwanikwa